ဆရာကွီးမငျးသိင်ျခ ပွောခဲ့တဲ့ အောငျမွငျလိုသူတိုငျး လိုကျနာရမယျ့ လမျးပွမွပေုံ (၇)ခု - Barnyar Barnyar
ဆရာကွီးမငျးသိင်ျခ ပွောခဲ့တဲ့ အောငျမွငျလိုသူတိုငျး လိုကျနာရမယျ့ လမျးပွမွပေုံ (၇)ခု
April 3, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
၁. မငျးပိုငျတဲ့ တောငျးထဲမှာ ကွကျဥ ၁ဝလုံး ရှိတယျ တဈနကေို့ ၉လုံးစားပွီး ၁ လုံးခနျြထားလို့ ၁ဝရကျကွာရငျ ဘာဖွဈမလဲ။ ကွကျဥ ၁ဝလုံး ရောကျနပွေီပေါ့ တဈလုံး လြှော့စားလိုကျတဲ့အတှကျ မငျးလညျး ဘာမှ မသိသာပါဘူး။
ဆိုလိုတာက အလုပျလုပျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဝငျငှေ ၁ဝပုံ ၁ပုံကို အမွဲခနျြထားရမယျကှ။ ၉ ပုံတောငျ သုံးရတဲ့အတှကျ ဒီလောကျကွီးလညျး ခြိုးခွုံရာ မကွဘူးမဟုတျလား ဒါ ငါပွောခငျြတဲ့ မွပေုံ ၁ ကှ။
၂။ နောကျတဈခုက မငျးရဲ့ဝငျငှေ ထှကျငှတှေကေို သသေခြောခြာ သိထားဖို့လိုတယျ။ မလိုအပျပဲနဲ့ ထှကျနတေဲ့ လမျးကွောငျးတှရှေိရငျ အမွနျ ပိတျပဈပတေော့။ အဲလိုမှ မလုပျရငျ အိတျပေါကျ နဲ့ ဖားကောကျသလို ဖွဈနလေိမျ့မယျကှ။ ဒါငါပွောခငျြတဲ့ မွပေုံ ၂ ပဲ။
၃။ တတိယတဈခုက ငှကေို စုပမေယျ့ သကျမဲ့လို သဘောမထားရဘူး။ နှားတှေ ကွကျတှေ မှေးသလိုပေါ့။ အကောငျတှပှေား ၊ ဥတှဥေ အကောငျထပျပှားပေါ့ကှာ။ ငှကေိုငှခေငျြး ထပျပှားနိုငျဖို့ အကြိုးရှိတဲ့ နရောတှမှော ထညျ့ဝငျမွုပျနှံကှ။ အဲလိုမှ မလုပျပဲ ငှကေို သတ်ေတာထဲ ထညျ့သိမျးထားမယျဆိုရငျ ငှတှေဟော အကွောသသှေားလိမျ့မယျ။
လဖွေတျတဲ့လူလို မငျးငှတှေဟော အငျအားမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဥပမာကှာ ငါ့သား မှေးတုနျးက ငါငှလေေး နညျးနညျးအတိုးခထြားတယျ။ ရတဲ့အတိုးတှကေို မသုံးပဲ အရငျးထဲ ထပျမွုပျတယျ အဲဒီကနေ အတိုးပွနျဖွဈ ငါ့သား ၁၂နှဈရောကျလို့ ကြောငျးပို့မယျလုပျတော့ ငှကေိုပွနျထုတျလိုကျတာ မနညျးပါဘူးကှာ ဒါဟာမွပေုံ ၃ပေါ့။
၄။ နောကျတဈခုက အလုပျ လုပျတဲ့အခါမှာ လောငျးကစား မဆနျရဘူးကှ။ မွတျခငျြမွတျ မမွတျရငျသှားဟ ဆိုတဲ့သဘောမြိုး မလုပျရဘူး။ သခြောတာလောကျ ကိုယျကြှမျးကငျြသလောကျ နိုငျသလောကျပဲ လုပျရမယျ လောငျးကစားလုပျလို့ကတော့ ရလညျးခဏပဲ မှဲစရာရှိရငျ မွနျမွနျမှဲသှားလိမျ့မယျ။
တဈခါက မိုးကွိုးသှားတဈခုကို ငါ့လာရောငျးဖူးတယျ အပွောကလညျး ကောငျး လကျတှစေ့မျးပွတော့လညျး လြှပျစဈမီးလညျးငွိမျး ရဒေီယိုလညျး ရပျသှားတော့ အစဈလို့ ယုံသှားတယျ။ အစဈဆိုရငျ ပွနျရောငျးရငျ သိနျး ၂ဝလောကျ ရမှာကို ဒါနဲ့ ၁သိနျးနဲ့ ဝယျလာပွီး အိမျရောကျတော့ လြှပျစဈဓာတျမီးမပွောနဲ့ လကျနှိပျဓာတျမီးတောငျ မငွိမျးဘူး။
စနဈတကစြီစဉျပွီး လိမျသှားတာကှ။ တဈသိနျးမို့ပေါ့ ၁ဝသိနျးဆိုရငျ ငါခှကျဆှဲနလေောကျပွီ။ အဲဒီတော့ ပွောခငျြတဲ့ လေးအခကျြက ကိုယျမသိတဲ့ မပိုငျတဲ့အလုပျ ၊ မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျမှာ ဘာရငျးနှီးမွုပျနှံမှုမှ မလုပျရဘူး။
၅။ နောကျတဈခုက လူတဈယောကျဟာ အိမျငှားနတော မသငျ့တျောဘူး။ အခွအေနအေရ ငှားနရေငျလညျး ကိုယျပိုငျအိမျဖွဈအောငျ ကွိုးစားရမယျ။ အိမျငှား စရိတျဟာ ကွာလာရငျ အိမျတဈလုံးစာလောကျ ရှိလာတယျ စိတျရှုပျရတယျ သေးတာကွီးတာ ပဓာနမဟုတျဘူး။
ကိုယျပိုငျဖွဈအောငျ ကွိုးစားဖို့ပဲ။ အဲဒီအပေါကျက ငှေ အထှကျဆုံးပဲ ။ အဲဒီတော့ ကားပဲမောငျးမောငျး ၊ စကျလှပေဲထောငျထောငျ ကိုယျပိုငျဖွဈအောငျ အရငျဆုံးကွိုးစား ။ ဒါ ငါးခုမွောကျ မွပေုံပဲ။
၆။ တို့မွနျမာစကားမှာ မတျတတျစာပဲရှိတယျ၊ တုံးလုံးစာမရှိဘူး ဆိုတဲ့စကား ရှိတယျ။ စကားပဲ ရှိတာကှ မလိုကျနာကွဘူး။
ဒါကွောငျ့ မမြှျောမှနျးနိုငျတဲ့ အနာဂါတျအတှကျ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျထားရမယျ။ ရုတျတရကျ ကိုယျသသှေားရငျ ကနျြရဈသူ မိသားစုကို မထိခိုကျစဖေို့၊ ရုတျတရကျ ထိခိုကျမိလို့ ဒုက်ခိတဖွဈသှားရငျ ဆကျလကျအသကျရှငျနိုငျဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမယျ။ ဒါ ခွောကျခုမွောကျ မွပေုံပဲ။
၇။ (၇)ခကျြမွောကျ ကတော့ ကွိုးစားမှုကို မလြှော့ဖို့ပဲ ၊ ကိုယျနဲ့ လုပျငနျးတူတှေ ရှိနတေယျကှ ၊ ကိုယျကရပျပမေဲ့ သူတို့က ကွိုးစားနမှော၊ ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျမှာ အစှမျးထကျလလေေ ဝငျငှေ ကောငျးလလေပေေါ့ကှာ ၊ မငျးသဘောပေါကျဖို့က ကိုယျ့ဆီကို အားပေးတဲ့ဖောကျသညျတို့ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတို့ ဆိုတာ စိတျခရြတာမဟုတျဘူး ..
ကိုယျ့ထကျသာတဲ့လူ ၊ တျောတဲ့သူရှိရငျ အဲဒီကို သှားကွမှာ .. အဲဒါတော့ မွဲမွဲမှတျထား။ ငါပွောခငျြတဲ့ ရခုမွောကျမွပေုံက ဒါပဲ။ မငျးသဘောပေါကျဖို့ကတော့ အလုပျ တဈခုမှာ သဘာရငျ့ဝါရငျ့တာနဲ့ မကွီးပှားဘူးနျော တျောမကွီးပှားတာ.. ကုလို့ပြောကျတဲ့ ဆရာဝနျဆီကိုပဲ လူနာက သှားမှာနျော. သဘာရငျ့ဝါရငျ့တယျဆိုပွီး သှားမှာ မဟုတျဘူး… ဒီအခကျြကို မွဲမွဲသဘောပေါကျစမျးပါ။
ဆရာမငျးသိင်ျခရေးတဲ့ ဖြားသားခြောငျးက ရမြှေောကမျးတငျ အောငျဗဒငျဆိုတဲ့ စာအုပျထဲက တရုတျကွီးအဖောကျက စီးပှားရေးလုပျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ အောငျဗဒငျကို အကွံပေးနတောပါ။
မှတျသားစရာ အခကျြကလေးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ စာဖတျသူမြားအတှကျ သငျ့တျောသလို ပွနျလညျရေးသား ဝမြှေလိုကျပါတယျ ။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ပြောခဲ့တဲ့ အောင်မြင်လိုသူတိုင်း လိုက်နာရမယ့် လမ်းပြမြေပုံ (၇)ခု
၁. မင်းပိုင်တဲ့ တောင်းထဲမှာ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရှိတယ် တစ်နေ့ကို ၉လုံးစားပြီး ၁ လုံးချန်ထားလို့ ၁ဝရက်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရောက်နေပြီပေါ့ တစ်လုံး လျှော့စားလိုက်တဲ့အတွက် မင်းလည်း ဘာမှ မသိသာပါဘူး။
ဆိုလိုတာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဝင်ငွေ ၁ဝပုံ ၁ပုံကို အမြဲချန်ထားရမယ်ကွ။ ၉ ပုံတောင် သုံးရတဲ့အတွက် ဒီလောက်ကြီးလည်း ချိုးခြုံရာ မကြဘူးမဟုတ်လား ဒါ ငါပြောချင်တဲ့ မြေပုံ ၁ ကွ။
၂။ နောက်တစ်ခုက မင်းရဲ့ဝင်ငွေ ထွက်ငွေတွေကို သေသေချာချာ သိထားဖို့လိုတယ်။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ ထွက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေရှိရင် အမြန် ပိတ်ပစ်ပေတော့။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင် အိတ်ပေါက် နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကွ။ ဒါငါပြောချင်တဲ့ မြေပုံ ၂ ပဲ။
၃။ တတိယတစ်ခုက ငွေကို စုပေမယ့် သက်မဲ့လို သဘောမထားရဘူး။ နွားတွေ ကြက်တွေ မွေးသလိုပေါ့။ အကောင်တွေပွား ၊ ဥတွေဥ အကောင်ထပ်ပွားပေါ့ကွာ။ ငွေကိုငွေချင်း ထပ်ပွားနိုင်ဖို့ အကျိုးရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ထည့်ဝင်မြုပ်နှံကွ။ အဲလိုမှ မလုပ်ပဲ ငွေကို သေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ငွေတွေဟာ အကြောသေသွားလိမ့်မယ်။
လေဖြတ်တဲ့လူလို မင်းငွေတွေဟာ အင်အားမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဥပမာကွာ ငါ့သား မွေးတုန်းက ငါငွေလေး နည်းနည်းအတိုးချထားတယ်။ ရတဲ့အတိုးတွေကို မသုံးပဲ အရင်းထဲ ထပ်မြုပ်တယ် အဲဒီကနေ အတိုးပြန်ဖြစ် ငါ့သား ၁၂နှစ်ရောက်လို့ ကျောင်းပို့မယ်လုပ်တော့ ငွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တာ မနည်းပါဘူးကွာ ဒါဟာမြေပုံ ၃ပေါ့။
၄။ နောက်တစ်ခုက အလုပ် လုပ်တဲ့အခါမှာ လောင်းကစား မဆန်ရဘူးကွ။ မြတ်ချင်မြတ် မမြတ်ရင်သွားဟ ဆိုတဲ့သဘောမျိုး မလုပ်ရဘူး။ သေချာတာလောက် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သလောက် နိုင်သလောက်ပဲ လုပ်ရမယ် လောင်းကစားလုပ်လို့ကတော့ ရလည်းခဏပဲ မွဲစရာရှိရင် မြန်မြန်မွဲသွားလိမ့်မယ်။
တစ်ခါက မိုးကြိုးသွားတစ်ခုကို ငါ့လာရောင်းဖူးတယ် အပြောကလည်း ကောင်း လက်တွေ့စမ်းပြတော့လည်း လျှပ်စစ်မီးလည်းငြိမ်း ရေဒီယိုလည်း ရပ်သွားတော့ အစစ်လို့ ယုံသွားတယ်။ အစစ်ဆိုရင် ပြန်ရောင်းရင် သိန်း ၂ဝလောက် ရမှာကို ဒါနဲ့ ၁သိန်းနဲ့ ဝယ်လာပြီး အိမ်ရောက်တော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးမပြောနဲ့ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတောင် မငြိမ်းဘူး။
စနစ်တကျစီစဉ်ပြီး လိမ်သွားတာကွ။ တစ်သိန်းမို့ပေါ့ ၁ဝသိန်းဆိုရင် ငါခွက်ဆွဲနေလောက်ပြီ။ အဲဒီတော့ ပြောချင်တဲ့ လေးအချက်က ကိုယ်မသိတဲ့ မပိုင်တဲ့အလုပ် ၊ မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်မှာ ဘာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ မလုပ်ရဘူး။
၅။ နောက်တစ်ခုက လူတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ငှားနေတာ မသင့်တော်ဘူး။ အခြေအနေအရ ငှားနေရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ အိမ်ငှား စရိတ်ဟာ ကြာလာရင် အိမ်တစ်လုံးစာလောက် ရှိလာတယ် စိတ်ရှုပ်ရတယ် သေးတာကြီးတာ ပဓာနမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ။ အဲဒီအပေါက်က ငွေ အထွက်ဆုံးပဲ ။ အဲဒီတော့ ကားပဲမောင်းမောင်း ၊ စက်လှေပဲထောင်ထောင် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံးကြိုးစား ။ ဒါ ငါးခုမြောက် မြေပုံပဲ။
၆။ တို့မြန်မာစကားမှာ မတ်တတ်စာပဲရှိတယ်၊ တုံးလုံးစာမရှိဘူး ဆိုတဲ့စကား ရှိတယ်။ စကားပဲ ရှိတာကွ မလိုက်နာကြဘူး။
ဒါကြောင့် မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားရမယ်။ ရုတ်တရက် ကိုယ်သေသွားရင် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို မထိခိုက်စေဖို့၊ ရုတ်တရက် ထိခိုက်မိလို့ ဒုက္ခိတဖြစ်သွားရင် ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ဒါ ခြောက်ခုမြောက် မြေပုံပဲ။
၇။ (၇)ချက်မြောက် ကတော့ ကြိုးစားမှုကို မလျှော့ဖို့ပဲ ၊ ကိုယ်နဲ့ လုပ်ငန်းတူတွေ ရှိနေတယ်ကွ ၊ ကိုယ်ကရပ်ပေမဲ့ သူတို့က ကြိုးစားနေမှာ၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်မှာ အစွမ်းထက်လေလေ ဝင်ငွေ ကောင်းလေလေပေါ့ကွာ ၊ မင်းသဘောပေါက်ဖို့က ကိုယ့်ဆီကို အားပေးတဲ့ဖောက်သည်တို့ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တို့ ဆိုတာ စိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူး ..
ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူ ၊ တော်တဲ့သူရှိရင် အဲဒီကို သွားကြမှာ .. အဲဒါတော့ မြဲမြဲမှတ်ထား။ ငါပြောချင်တဲ့ ရခုမြောက်မြေပုံက ဒါပဲ။ မင်းသဘောပေါက်ဖို့ကတော့ အလုပ် တစ်ခုမှာ သဘာရင့်ဝါရင့်တာနဲ့ မကြီးပွားဘူးနော် တော်မကြီးပွားတာ.. ကုလို့ပျောက်တဲ့ ဆရာဝန်ဆီကိုပဲ လူနာက သွားမှာနော်. သဘာရင့်ဝါရင့်တယ်ဆိုပြီး သွားမှာ မဟုတ်ဘူး… ဒီအချက်ကို မြဲမြဲသဘောပေါက်စမ်းပါ။
ဆရာမင်းသိင်္ခရေးတဲ့ ဖျားသားချောင်းက ရေမျှောကမ်းတင် အောင်ဗဒင်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက တရုတ်ကြီးအဖောက်က စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အောင်ဗဒင်ကို အကြံပေးနေတာပါ။
မှတ်သားစရာ အချက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူများအတွက် သင့်တော်သလို ပြန်လည်ရေးသား ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
ငရဲသားသညျ အပူရှိနျပွငျးသော ငရဲမီးထဲ၌ အဘယျကွောငျ့ လောငျကြှမျး ကမြှေခွငျး မဖွဈသလဲ
Total Hits : 336105